एउटा आँपमा मेरो नजर | Hamro Patro
म उठेॅ अनि कोठाको झ्याल खोलेॅ। त्यहाँबाट एउटा आँपको रुख देखियो अनि नियाल्दै जाँदा एउटा आँपमा मेरो नजर गयो; जुन अब पाक्न लागिरहेको थियो ।अनि मैले झट्ट सम्झिएॅ; ती दिन जब म त्यो रुखमा दैनिक जसो चढ्ने गर्थेँ । त्यो समय त्यो आॅप सानै थियो । अरू फलजस्तै ऊ पनि कुनै एउटा हाँगोमा झुन्डिरहेको हुन्थ्यो । म अरु आॅपहरू टिपेझै गर्थेँ (कहिले पनि टिपीन) तर त्यो आॅप बाट ओझेलमा नै हुन्थेँ । अहिले म त्यो रुख चढ्न छोडिदिए र त्यो आॅप पनि ठुलो भयो। आज फेरि झ्यालबाट हेर्दा म झसङ्ग पर्नु स्वभाविक नै थियो; किनकी म अब त्यो रुख चढ्नु असम्भव जस्तै थियो । फेरि पनि म अब त्यो आॅप आफै खान चाहन्थे । यस्तैमा मैले घोचेर खसालौ कि भन्ने सोचेॅ।बडो मेहनत गरेॅ तर म असमर्थ भएँ। अब के गर्ने त? म फेरि सोच्न थाले ।
केही सोच्दै अनि आँपलाई हेर्दै गरिरहेको समयमा केही साथीहरु पनि आए। तीमध्ये केहीलाई मैले त्यो आँप खाने कुरा बताएँ। केही सहयोग गर्न तयार भएपनि ऊनीहरू समेत रूख चढ्न नसक्ने हुनाले झ्यालबाट हेर्नुको विकल्प थिएन । एकजना साथीले प्रयास गरेपनि ऊ चिप्लीएकोले "यो छोड्,म अरू आँप दिउला"भन्दै पन्छियो।
म एकमनले सोँच्थे,"कतै त्यो आँप अर्कोपट्टिबाट चरो वा मुसाले खाएको त छैन? "; फेरि अर्को मनले भन्यो, "यदि खाएको हुन्थ्यो भने त या झरिसक्थ्यो नत्र यस्तो देखिँदैन थियो । "कुनै वेला सोँच्थे,"आँप त जतिपनी छन् ;अरू खाएनी हुन्छ "। फेरी सोँच्थे,"अब त्यो जस्तो स्वादिलो शायदै अरू होला ।"
मैले बीचबीचमा झ्यालबाट नै सानासाना ढुङ्गाले त्यो आँपलाई हान्ने कोसिस पनि गरेँ तर सबै खेर गए । अब त्यो रूख चढ्न म नसक्ने हुनाले त्यो आँप आफै खसे मात्रै हो नत्र असम्भव नै थियो । दिउँसो हावा चल्दा त्यो आँप हल्लिन्थ्यो अनि म भएतिरै आएजस्तो लाग्थ्यो; कुनै समय चाहिँ मबाट टाढा गएझैँ लाग्थ्यो (मनको सोचाइ)।
यसबीचमा केही चराहरूले त्यो आँप खाने कोसिस गरे तर खाए वा खाएनन् मलाई प्रष्ट देखिएन किनकी आँप केही दुरीमा थियो र उसको एक भाग मात्र मपट्टि देखिएको थियो । यस्तै कतिखेर बादल लागेर त कतिखेर घाम चर्केर ,कतिखेर हावा लागेर त कतिखेर चराहरू आएर त्यो आँप बीचबीचमा छेकिदै अनि देखिदै थियो । यस्तैमा मैले पत्तो पाएँ कि घाम डुब्नै लागेको रहेछ । अब मनमा चिन्ता बढ्न लाग्यो, "कतै साँझ परेपछि चरा वा मुसाले त्यो आँप खाइदिने त होइन?" साँझ परेपछि जे पनि हुन सक्थ्यो । घाम बिस्तारै ढाकिदै छ तर मलाई भने त्यही आँपको चिन्ता लागिरहेछ ..........................